Hogaamiyaasha Kaniisada England & Diinta Buddhist-ga oo dhaliilay dilka Bin Ladin – SBC
Hogaamiyaasha Kaniisada England & Diinta Buddhist-ga oo dhaliilay dilka Bin Ladin
Dhaleeceyn & ku faraxsanaan la’aan ayaa ka timid Hogaamiyaasha Kaniisadaha England & Madhabkta Buddhist kuwaasi oo si adag uga hadley dilka Osama Bin ladin iyagoo si kulul u muujiyey sida ay uga xun yihiin.
Dr Rowan Williams “Farxad la’aan ayaan dareemayaa”
Hogaamiyaha kaniisadaha Engaldnee isla markaana u taagan calaamada hogaamka madhabta Anglican Communion, ee aduunka The Archbishop of Canterbury Dr Rowan Williams ayaa si kulul uga hadley dilkii ciidamada Kumaandooska Mareykanka ay sheegeen in ay ku dileen Osama Bin Ladin, isagoo waliba la xaqiijiyey in aanu hubaysneyn.
Dr Rowan Williams oo ka hadlayey hadalada ka soo yeereya madaxda Aqalka Cad ayaa yiri “Aad ayaan u dareemayaa farxad la’aant” ku aadan dilka Osama Bin Ladin.
Laakiin dadka & hogaamiyeyaasha Mareykanku waxay ku adkeysanayaan inay sax & waajid ku tahay dabaaldega & farxada ay ka muujinayaan dilka Osama Bin Ladin oo lagu eedeynayo in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii September 2001-dii lagu ekeeyey xarumo ku yaal magaalooyinka Washington New York.
Isagoo soo xiganeyey falcelinska aan niyada wanaagsaneyn ee ka imaanada aduunka ee la xiriira dilka hogaamiyaha Al-Qaacida wuxuu sheegay Baadriga Kaniisada England in aanay sax aheyn hadalka ka soo baxay madaxda aqalka cad ee ah in ay timid cadaaladii mar hadii la diley hogaamiyaha Al-qaacida, wuxuuna yiri isagu “Lama arag cadaalad dhacdey”.
“Waxaan hubaa dilka qof aan hubeysneyn mar kasta uu yahay mid aan keeneyn wax farxad ah, waayo uman muuqanayso in cadaaladi timid” ayuu Dr Rowan Williams.
Dr Rowan Williams waxaa kale oo uu yiri “Uma maleynayo in ay tahay run xaaaldaha isbad badalaya ee ku gadaaman dhacdadan maalmihii ugu dambeeyey”.
Halkan ka eeg website-ka Kaniisada England :
Hogaamiyaha Diinta Buddhist “Dilka Bin Ladin waa murugo”
Sidoo kale hogaamiyaha sare ee diinta Buddhist the Dalai lama ayaa isaguna dhankiisa ka sheegay sida aanu ugu faraxsaneyn dilka Osama Bin Ladin wuxuun yiri “Dilka Osama waa murugo marka loo fiiriyo diinta Buddhist.
Isagoo ka qaybgaleyey shirka dhalinyarada ee magaalada California ee dalka Mareykanka Dalai Lima waxaa la waydiieyy sida uu yahay dareenkiisa ku aadan dabaaldegyada loo sameynayo dilka Osama Bin Ladin waxaana uu yiri “Marka aan ka hadleyno diinta Buddhist tusalaooyinka cadowgaaga waxay noqon karaan macalinkaaga kuugu weyn ,waxaan qabaa in ay tahay murugo”.
“Laakiin kuwa rumaysan in cadowgaagu yahay cadow dhab ah, waxay aaminsan yihiin fikrado aynan qabin” ayuu ku yiri Dalia Lima warbixin uu ku qoray website-kiisa rasmiga ah.
Eeg website-ka Dalia Lima
waxa aan leeyay ilaahay ha kudilo